Sands Golden, osimiri kacha mma na Bulgaria | Akụkọ Njem
Osimiri na Resorts | | Bulgaria, Osimiri
Bulgaria nwere ezigbo oke osimiri na Oke Osimiri Ojii. Naanị lee anya na map iji chee ịma mma nke ụsọ mmiri ndị a. N’akụkụ osimiri, e nwere ọtụtụ oge ezumike a na-etinye ha n'akụkụ ụsọ mmiri Bulgarian na Turkey. Ọ ga-enwe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita 380 nke ụsọ oké osimiri na ọtụtụ osimiri dị ebe a nwere ngụkọta nke ihe dịka 130 nke kilomita ndị ahụ.
Na Europe n'oge okpomọkụ ọnwa Bulgarian Black Sea n'ụsọ oké osimiri ọ na-aghọ ebe ezumike na-ewu ewu. Ihu igwe bụ udu mmiri, ọnọdụ okpomọkụ na-adịkarị gburugburu 28ºC na nke mmiri karịrị 25ºC ya mere na ọ bụ obere paradaịs nwere mmetụ nke Caribbean. Anyanwụ na-awa fọrọ nke nta ka ụbọchị ọ bụla n'etiti May na September, ma ọ bụrụ na ị na-ama na Bulgarian osimiri... ị nwere ike ịmalite na otu n'ime ihe kacha mma, Aja aja.
La aja aja aja ọ bụ ọlaedo ájá, doro anya. Ọ dị kilomita iri na itoolu site na obodo Varna ma bụrụkwa ebe ọdụ ụgbọ mmiri kachasị ukwuu dị na mgbago ugwu Black Sea. Na mgbakwunye na aja aja na ọla edo enwere otutu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, osisi, ọhịa na ihe niile dị ka etinyere na nnukwu ogige. Bụ osimiri osimiri Bulgaria Enweela onyinye na nhazi ọkwa Blue ọkọlọtọ ya mere enwere ịdị ọcha na ịdị ọcha.
En Aja aja enwere otutu ulo oriri na ulo ndi ozo, onu ahia di iche iche, ulo nri na ulo ahia. Arefọdụ nọ n'ụsọ oké osimiri ma ọtụtụ na-ezo n'ime ogige ahụ, gburugburu, na-aga n'ihu, na-adịghị eme mkpọtụ. E nwere ogige mmiri ma nwee ike ịgbazite ọtụtụ egwuregwu egwuregwu. Fọdụ ozi ndị ọzọ: ọ dị kilomita 490 site na Sofia, ọ nwere isi iyi na-ekpo ọkụ, a na-akwụ ụgwọ ụlọ na oche oche, enwere slides, ọdọ mmiri n'èzí na ihe omume dị iche iche n'oge ọkọchị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Osimiri » Sands Golden, osimiri kachasị mma na Bulgaria
Olee otu esi eme osimiri?